सांसद अरगरियाको कोषबाट सामुदायिक भवन बन्ने - News Madhesh
सांसद अरगरियाको कोषबाट सामुदायिक भवन बन्ने
जनकपुरधाम , १३ चैत्र । धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन निर्माण हुने भएको छ ।
धनुषा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभासदस्य उमाशंकर अरगरियाको सांसदीय कोषबाट यो भवन निर्माण हुने भएको हो ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्य अरगरियाले एक कार्यक्रमका बिच जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नं. २ बलहागोठमा सामुदायिक भवनको शिलान्यास गरेका छन् । त्यस अवसरमा बोल्दै सांसद अरगरियाले यस क्षेत्रको विकासका लागि आफू सँधै तत्पर रहने बताए ।
बलहागोठमा सामुदायिक भवन नहुँदा स्थानीय वासीलाई कुनै भेला, कार्यक्रम गर्न समस्या हुन गरेको मध्यनजर गर्दै सो भवन निर्माण गरिने उनले बताए । सांसद अरगरियाको सांसदीय कोषबाट १० लाख रुपैयाँको लागतमा यो भवन निर्माण हुनेछ ।
सामुदायिक भवन बन्ने भएपछि स्थानीयहरु हर्षित भएका छन् । स्थानीय रमण मंडलले सामुदायिक भवन बनेपछि आफूहरुलाई सजिलो हुने बताए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीय नेताहरु जिवछ पघैया, अशोक मंडल, इन्द्र कुमार सहितकाले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।